IHE DỊ MMA SSD MA Ọ BỤ HDD: URU NA ỌGHỌM - DISK - 2019
Kọmputa ndị mbụ ejiri chekwaa kaadị kaadi mkpanaka data, teepu tape, diskettes nke ụdị na nha. Mgbe ahụ, ọbịbịa nke afọ iri atọ ahụ nke otu ọkpụkpụ na-arụ ọrụ siri ike, nke a na-akpọ "draịva siri ike" ma ọ bụ HDD-draịva. Ma ugbu a, ụdị ọhụrụ nke nchekwa na-adịghị na-apụtaghị ìhè bụ nke na-apụta ngwa ngwa inweta nkwado. SSD a bụ ụgbọala siri ike. Kedu ihe ka mma: SSD ma ọ bụ HDD?
Esemokwu dị na nchekwa data
Enweghị ike ikpo okwu siri ike. Ọ na-enwe ọtụtụ mgbaaka magnetik dị iche iche maka ịchekwa ozi na isi okwu na-agagharị na ha. Ọrụ nke HDD dị n'ọtụtụ ụzọ yiri ọrụ nke onye ọkpụkpọ vidio. A ghaghị iburu n'obi na n'ihi ụba nke akụkụ ahụ, "ọkpụkpụ siri ike" ga-eyi n'oge arụ ọrụ.
Ụgbọ ala siri ike dị iche iche. Enweghị mpi igwe na ya, ndị na-arụ ọrụ na semiconductors na-ejikọta na sekit jikọtara ha bụ maka nchekwa data. N'ikwu okwu siri ike, a na-ewu SSD na otu ụkpụrụ ahụ dị ka ọkụ mbanye. Ọ na-arụ ọrụ karịa ngwa ngwa.
Isiokwu: tụnyere njigide nke draịva siri ike na draịvụ siri ike
Ngosipụta HDD SSD
Size na arọ ọzọ obere
Ike nchekwa 500 GB - 15 TB 32 GB-1 TB
Ụgwọ ahịa na ikike 500 GB site na 40 s. e. site na 150 y. e.
Oge Obere Oge OS 30-40 sekọnd 10-15 sekọnd
Ọkwa ọkwa enweghị isi na-efu
Egwuregwu eletrik ruo 8 W ruo 2 W
Ọrụ mmebi oge adịghị achọrọ
Mgbe ị tụlechara data a, ọ dị mfe ịchọta na diski diski dị mma maka ịchekwa ọtụtụ ihe ọmụma, na ikuku siri ike - iji mee ka arụmọrụ nke kọmputa dịkwuo elu.
Na omume, usoro ngwakọ nke ncheta na-adịgide adịgide bụ ebe niile. Ọtụtụ sistemụ nke oge a na laptọọpụ na-enwe ike diski ike nke na-echekwa data ndị ọrụ, na kuki SSD bụ maka maka ịchekwa faịlụ, mmemme, na egwuregwu.